10 Waxyaabood oo ay Wakaaladdaadu waysay oo sii wadaysa inay ku dhaawacdo meheraddaada | Martech Zone
Axad, Sebtembar 19, 2010 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Shalay, waxaan ku faraxsanaa inaan aqoon-isweydaarsi la sameeyo gobolka Ururka Af-hayeennada Qaranka, oo ay hoggaamiso Karl Ahlrichs. Dadka ku hadla afka bulshada, waa muhiim in la helo websaydh weyn oo kaqeybgalayaasha badankood way layaabeen markay heleen xoogaa dhimman istiraatiijiyadooda.
Inta badan tani waa sababta oo ah warshaduhu si aad ah ayey isu beddeleen… hay'adaha badidooduna ma sii wadin. Haddii aad si fudud u sameysatid degel, waxay lamid tahay inaad meherad ka furaneyso meel dhexe. Way qurux badnaan kartaa, laakiin macaamiil kaaama helayso. Waa kuwan 10 astaamood oo wakaaladdaadu ay tahay inay ku darto markay horumarinayso bartaada:
Nidaamka Maareynta Maareynta - waa wax lagu qoslo wakaaladuhu inay macaamiishooda u afduubtaan mar dambe wixii cusbooneysiin iyo tafatir ah markii nidaamyo badan oo maareynta maareynta maadooyinka ah ay jiraan. Nidaamyada maaraynta mawduucyada ayaa kuu oggolaanaya inaad ku darto oo aad wax ka beddesho boggaaga sida aad rabto, markaad rabto. Hay'addaadu waa inay awood u yeelataa inay ku dabakho naqshadeyntaada ku dhowaad wax kasta oo awood u leh mashiinnada maareynta maareynta maadooyinka.
Dhiciyaan Search Engine - haddii hay'addaadu aysan fahmin aasaaska hagaajinta mashiinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad hesho hay'ad cusub. Waxay la mid tahay dhisida goob aan aasaas lahayn. Mashiinnada raadinta ayaa ah buugga taleefanka cusub… haddii aadan ku jirin, ha ka fileynin inuu qof ku helo. Waxaan ku riixi lahaa inay xitaa awoodaan inay kaa caawiyaan aqoonsashada ereyada muhiimka ah ee bartilmaameedsanaya qaarkood.
Analytics - waa inaad lahaataa faham aasaasi ah Analytics iyo sida loo arko bogagga iyo waxyaabaha ka kooban booqdayaashaadu ay xoogga saarayaan si aad u hagaajiso goobtaada waqti ka dib.
Blogging iyo Video - balooggu wuxuu siin doonaa shirkaddaada qaab isgaarsiinta wararka, ka jawaab su'aalaha inta badan la isweydiiyo oo aad la wadaagto guulaha rajooyinkaaga iyo macaamiishaada iyo sidoo kale inaad siiso habab ah inaad raacdo, adoo adeegsanaya rukhsad, iyo inaad kula xiriirto soo noqoshada. Quudintaada waa in lagu baahiyaa bog kasta. Fiidiyowgu wuxuu ku dari doonaa tan goobtaada - wuxuu sharraxaad ka bixinayaa fikradaha adag si aad u fudud sidoo kale wuxuu hordhac weyn u yahay dadka ka dambeeya shirkaddaada.
Form Contact - Qof kastaa maahan inuu doonayo inuu taleefanka kaa qabto oo uu ku soo waco, laakiin badanaa waxay kugu soo qorayaan foomka xiriirkaaga. Waa amaan waana fududahay. Xitaa uma baahna inay barnaamij ka sameystaan… si fudud ayey xisaab kugu heli karaan dhismaha foomka internetka,Qalabaynta , oo waad kici doontaa oo socon doontaa!
Kicinta Mobilada - Boggaagu waa inuu ku ekaadaa aaladda moobaylka. Way fududahay in la sameeyo CSS mobilada (stylesheet) kaas oo u oggolaanaya booqdayaasha moobiilka in ay baaraan goobtaada, helaan meesha aad joogto, ama gujiso xiriir si aad u sameyso taleefoonka.
Twitter - Hay'addaadu waa inay u dhistaa asal ku kalifaya boggaaga Twitter oo u dhigma sumadda boggaaga. Waa inay sidoo kale dhexgalaan balooggaaga adoo adeegsanaya aalad sida Twitterfeed si toos ah ugu dhejisa cusbooneysiinta bartaada. Hay'addaadu waa inay sidoo kale dhexgashaa twitter-ka bartaada, ama iyada oo loo marayo astaan ​​bulsho oo fudud ama iyadoo la soo bandhigayo waxqabadka ugu dambeeyay ee bartaada.
Facebook - Hay'addaadu waa inay sidoo kale ku dabaqdaa astaantaada bogga gaarka ah ee Facebook oo ay ku dhex milmaan balooggaaga adoo adeegsanaya qoraallo ama Twitterfeed.
Goobaha Bogagga - Wicitaanada-Si-Wax-ku-ool ah oo si wanaagsan loo qaabeeyey oo ku saabsan boggaaga ayaa siin doona wadiiqad ay uga hawl galaan booqdayaashaada oo bogga soo degaa ayaa u rogi doona macaamiil. Hay'addaadu waa inay kaala hadashaa xulashooyinka ku saabsan sida loo wado dariiqyada bog kasta oo ka mid ah boggaaga - iyada oo loo marayo demos, waraaqo cad, foomam macluumaad dheeri ah, ebook, lagala soo baxo, tijaabooyin, iwm oo aruurinaya macluumaadka xiriirka.
Email Marketing - Soo booqdayaasha shabakadaadu had iyo jeer diyaar uma aha inay iibsadaan… qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay rabaan inay isdhaafsadaan xoogaa kahor inta aysan go'aansan inay iibsadaan. Wargeys toddobaadle ah ama bille ah oo ka hadla macluumaadka ku habboon iyo waqtiga ku habboon ayaa noqon kara xeeladda keliya. Wakaaladdaadu waa inay kuheshaa kuna shaqeysaa emayl summad leh oo adag adeeg bixiyaha adeegga emaylka, sida CircuPress. Waxyaabaha ku jira bartaada ayaa xitaa wadi kara emaylka maalinlaha ah ee otomaatigga ah nidaamkooda markaa xitaa uma baahnid inaad gasho!
Hay'adaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay dib ugu riixaan inay shaqadan oo dhan ku qabtaan goobta iyo goobta dhexdeeda… Waxba igama gelin. Waa waqtigii ay la kici lahaayeen macaamiishooda oo ay fahmeen in si fudud riixitaanka degel qurux badan uusan ku filneyn. Maalmahan, istiraatiijiyaddaadu waxay u baahan tahay inay dhaafto boggaaga oo ay ku darto warbaahinta bulshada, hagaajinta mashiinka raadinta, iyo istaraatiijiyadaha suuq geynta.
Hay'adaha feejignaanta Hadaadan udiyaarinayn macaamiishaada si buuxda uga faa'iideyso shabakadda, waxaad ku qaadaneysaa lacag dameer nus dameer. Macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin inaad u dhisto websaydh iyo istiraatiijiyad ganacsi ku siisa.
Tags: wakaaladahahay'addaAnalyticshubkaafoomka xiriirnidaamka maamulka contentEmail MarketingFacebookboggaga soo degayahagaajinta mobiladaayna search engineTwittersuuqgeynta fiidiyowgagaraacis
Baraha Bulshada waa PR-ka cusub
Sep 20, 2010 at 8: 00 AM
Waxaan u maleynayay in waxaas oo dhami ay ahaayeen heer illaa hadda. Waxaa si gaar ah nasiib daro ah in ururada qaar wali aysan isticmaalin nidaam maareyn maareyn dhab ah!
Sep 20, 2010 at 8: 06 AM
Ogolow Michael! Nasiib darrose wali waxaan haynaa labba Hay'adood oo kaliya ka shaqeeya khabiirkooda oo aan fahmin shuruudaha ganacsiga ama fursadaha maadaama aysan la socon isbeddellada internetka, raadinta iyo warbaahinta bulshada. Sidoo kale, ganacsiyada qaar ayaa eedda leh - ganacsiyada qaarkood ma ogaadaan suurtagalnimada in istiraatiijiyad weyn ay bixiso, sidaa darteed waxay u dukaameystaan ​​goobta ugu jaban ee ay iibsan karaan.
Sep 21, 2010 at 10: 24 AM
Meel madhan dhammaan astaamahan ayaa macno samaynaya, shirkad ahaanna waxaan u soo bandhignaa macaamiisheenna, iyo xitaa in ka badan, sida codsi moobiil ah haddii uu ku habboon yahay qaabkooda ganacsi. Nasiib darro ganacsiyada qaarkood waxay eegaan baloog ama inay maareeyaan boggooda culeys, sidaa darteed qaar badan ayaa dooran doona inaysan marin wadadan. Aragtidooda ayaa ah, maxaad ugu turunturooneysaa isku day inaad sawir cusub ku darto websaydhkeenna oo aad u saxdo dhowr saacadood, marka aan ku bixin karo horumariyahayga 15 daqiiqo.
Dhawaan nin aanu saaxiib nahay ayaa soo saaray degelkiisa, markii aan waydiiyey intee in le’eg ayay qaadatay, ma uusan hubin laakiin waxay ka badnayd 100 saacadood oo cilmi-baaris ah, tababar ku saabsan WordPress iyo hirgelinta, iyo dib-u-dhaqan gelin - waa hagaag, haddii aad taas turjunto qiimihiisa saacad ahaaneed ee tababare shakhsi ahaaneed (qiyaastii $ 90), taasi waxay ku kordheysaa lacag dhab ah.
Marka, in kasta oo dhinacyadan oo dhami ay macno samaynayaan, milkiileyaal badan oo ganacsi, oo uu ku jiro mid aan maanta la hadlay, waxay u fiirsadaan balooggabyada IWM inay tahay shaqo kale, iyo mid ay si fudud u haystaan ​​wakhti ay ku fuliyaan maalin kasta. Marka, haddii ay leeyihiin horumariyeyaashu shaqada qabtaan oo ay ka saaraan liistooda waxa ay sameynayaan, uguma yeerayo in afduub lagu haysto –Waxaan ugu yeeray in si caqligal ah loo adeegsado maaraynta waqtiga.
Sep 21, 2010 at 3: 59 PM
Gabi ahaanba waan ogolahay, Preston. Arrinteydu waxay tahay in Hay'aduhu aysan xitaa kala hadlin fursadda ay macaamiishooda u leeyihiin inay wax ku qoraan oo ay qiimeeyaan inay tahay istiraatiijiyad wax ku ool ah iyo in kale. Taasi waa ayaan darro.
Sep 22, 2010 at 7: 18 AM
Haa, waa hagaag in mid kasta oo ka mid ah qodobadan ay tahay in laga wada hadlo oo dib loo eego - in laga tago bixinta waa khalad aad u weyn. Mararka qaar waxay umuuqataa inaan rabo inaan macaamiisha ka codsado inay maraan wadada SMM, laakiin ganacsiyada badankood ee aan la kulmo wali ma rabaan inay taabtaan – kaliya marka qof aan iibinaynin 'fulinta' adeegyada uu tuso waxa ka dhalan kara, dheh saaxiib, iyagu markaas ma dan bay muujiyaan.
Waxaan u maleynayaa in laga helo meel gees ah dhaqaalahan, mid kasta oo ka mid ah qodobadan ayaa lagama maarmaan u ah ganacsi KASTA, laakiin nasiib daro wali waxaa jira shirkado halkaas ka jira oo leh degello deg deg ah jiilkii ugu horreeyay oo ku qaylinaya degel deg deg ah, wicitaanno ficil, iyo baloog – weli ganacsatadu waxay yiraahdaan "kama helo ganacsiga internetka." Hagaag, lol, layaab malahan… 😉